मेसी र कुकुरबीचको फुटबल तपाई पनि हेर्ने हो ? (भिडियोसहित) – Everest Dainik – News from Nepal
मेसी र कुकुरबीचको फुटबल तपाई पनि हेर्ने हो ? (भिडियोसहित)
एजेन्सी, साउन १६ । अर्जेन्टिनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी हालै सम्पन्न भएको रसिया विश्वकपको नतिजालाई भुल्न विभिन्न जुक्ति निकाली रहेका छन् । उनको टिम खराब प्रदर्शनका कारणा अन्तिम ८ नपुग्दै घर फिर्ता भएको थियो । त्यहि तनावालाइ भुलाउन अहिले मेसी विभिन्न उपाय अपनाई रहेका छन् ।
विश्वकपबाट बाहिरएसँगै मेसीले पूरा एक महिना परिवारसँग बसेर समय विताएका छन् । उनी नयाँ सिजनका लागि बार्सिलोना फर्किएका छन् । उनी बार्सिलोना फर्किए पनि उनको फुटबलप्रतिको मायाको एउटा रमाइलो विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ । मेसीको परिवारमा श्रीमती र छोराहरु त पक्कै छन् ।
यति मात्रै होइन घरका अरु सदस्यजस्तै पाया पाउने मेसीसँग प्रिय कुकुर पनि छ । त्यो कुकुरको नाम हुल्क हो। मेस्सीले आफ्नो गार्डेनमा हुल्कसँग फुटबल खेल्दै गरेको भिडियो उनकी श्रीमतीले पोस्ट गरेकी छन् । अहिले यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा शरीरको माथिल्लो भागमा लुगा नलाएका मेस्सी र हुल्कले फुटबल खेलिरहेका छन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
ट्याग्स: Leonal Messi, Messi And Hulk